अमेरिकामा नेपाली ट्याक्सी चालकलाई न’राम्रो व्य’वहा’र गर्ने युवती पक्राउ – NepalajaMedia
March 12, 2021 360
काठमाडौँ– अमेरिकामा नेपाली ट्याक्सी चालकलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने युवती पक्राउ परेकी छन् । ट्याक्सी चालक सुभाकर खड्कामाथि निकै नराम्रो व्यवहार गर्ने युवती पक्राउ परेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
नेपाली ट्याक्सी चालक खड्कामाथि गरेको आरोपमा सान फ्रान्सिस्को प्रहरीले २४ वर्षीया मलेसिया कि ङलाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई दु ‘र्व्य ‘वहा ‘र र लु’ टपा’ ट’को मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
गत सोमबार तीन युवतीले चालक खड्कालाई यस्तो गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो। खडकाले ती युवतीलाई मास्क लगाउन आग्रह गरेपछि ती युवतीहरूले त्यो खालको ह र्कत गरेका थिए।
उनले मार्च ८ का दिन अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को बेभ्यू क्षेत्रबाट ती तीन यात्रुलाई गाडीमा चढाएका थिए। उनले ती मध्येकी एक युवतीलाई मास्क लगाउन आग्रह गरेपछि उनीहरुले नराम्रो शब्द प्रयोग गरि शा’री’रि’क ह म ला समेत गरेका थिए। उनले खड्काको मोबाइलसमेत खोसेकी थिइन्।
यात्रुले मास्क नलगाएपछि शुभाकरले विनम्रतापूर्वक आफूले ट्रिप रद्द गर्न लागेको भन्दै उनीहरुलाई गाडीबाट ओर्लिन भनेका थिए। भिडियोमा ती युवतीहरूले उनलाई गा ली गर्ने, उनको अगाडि मास्क ह’ल्ला’उ’ने, उन’ला’ई कु टपि ट गर्नेदेखि उनको फोन चो र्ने प्र’यास गरेका थिए।
Prevनेपाली उबर ड्राइभरका शुभाकर खड्कालाई उठ्यो ७४ लाख
Nextकन्चनको घरमा पुगे रवि लामिछानेको मुद्दा ल ड्ने वकिल , के अब कन्चनले न्याय पाउलान् ? अब के हुन्छ ? (भिडियो सहित)
बीच बजारमा एक युवतीले अन्जान महिलालाई काकी भनेर बोलाएपछि जे भयो